Uyicwangcisa njani iSiboniso seSilayidi sePowerPoint yakho kwiWindows Window yeziNto eziSebenzayo | Martech Zone
Njengoko iinkampani ziqhubeka nokusebenza ekhaya, inani leentlanganiso ezibonakalayo sele linyukile. Ndiyamangaliswa ngenani leentlanganiso apho umbonisi enemicimbi enokwabelana ngePowerPoint Presentation kwiscreen. Andizishiyi kule nto… ndiye ndahamba amaxesha ambalwa apha endleleni kwaye ndalibazisa ukuqala kwe-webinar ngenxa yemicimbi endiyifakileyo.
Olunye useto olugqibeleleyo, nangona kunjalo, oluqinisekisa ukuba lusetwe kwaye lwalugcinwa ngayo yonke inkcazo ye-Intanethi endiyenzayo kukukwazi ukumilisela PowerPoint umboniso kwiwindows endaweni yokungagqibeki kwe Yenziwe nguSomlomo ezinokonakalisa ... ngakumbi ukuba usebenza nezikrini ezininzi. Inokufihla ukuhamba kwenkomfa yakho yesoftware kunye nokuvula iiwindows kwizikrini ezahlukeneyo… kwaye ubenokudideka macala onke.
IPowerPoint inento emnandi… kodwa kunzima ukuyifumana… ukuseta apho unokufumana eyakho UMboniso weSilayidi uvulwe kwifestile nganye endaweni yoko. Olu seto lwenza ukuba ukwazi ukuvula ngokulula iNgxelo kwimowudi yeSilayidi, kodwa kwiwindow enye ekulula ukuyaba kwiZoom okanye nayiphi na enye iwebhsayithi ekwi-intanethi okanye isoftware yokuhlangana kwaye ulawule ngokulula intetho yakho usebenzisa imouse yakho, amaqhosha akude, okanye utolo.
Iisetingi zoMboniso weSilayidi sePowerPoint
Ukuba uvula iprizenteyishini yakho yokuhlela, kukho imenyu yoMboniso weSilayidi kuhambo oluphambili. Uya kufuna ukucofa uMboniso weSilayidi:
Xa ucofa ukuseta uMboniso weSilayidi, uya kunikwa ukhetho lokuseta i UMboniso weSilayidi kwi window nganye. Jonga olu khetho, cofa u-Kulungile… kunye Gcina iNtshumayelo yakho. Okokugqibela kunokuba lelona nyathelo libalulekileyo ukuba ulungiselela kwaye uza kuvula inkcazo-ntetho yakho kamva xa i-webinar iqala. Ukuba awuyigcini ngokwenza useto lwenze ukuba kube njalo, iPrezishini iya kubuyela kwimowudi yeSithethi.
Le ntetho kumzekelo wam yinkqubo enye yedijithali endiyenzileyo kunye neYunivesithi yaseButler ngoku esetyenziswa kwilizwe liphela ukuqeqesha iqela eRoche. Senze umasifundisane obonakalayo kwi-Intanethi sisebenzisa i-Zoom saza sabandakanya amagumbi okuphuma kwe-Zoom, ii-Jamboards zemisebenzi, kunye nokunikezelwa. Ngenxa yoku, bendidinga i-intshi nganye kwizikrini zam ezintathu ukuze ndikwazi ukujonga amagumbi, iiseshoni ze-Jamboard, ividiyo yababekhona, iiseshoni zengxoxo, kunye nomboniso. Ukuba bendiyivulile iPowerPoint kwimo yeSomlomo, ngendiphulukene neefestile ezi-2 kuMboniso weSilayidi… kwaye mhlawumbi ndifihle inani leefestile ezifunekayo emva kwazo.
Icebiso lePro: Gcina oku kuseta ngeTemplate eQinisekisiweyo eQhelekileyo
Ukuba uyile itemplate yomboniso weSilayidi esiyiNtloko yombutho wakho, ndingacebisa ukuba ugcine itemplate kabini… enye yemowudi yeSomlomo enye imowudi yenyani ngolu seto lwenziwe. Ngale ndlela, njengoko iqela lakho lilungiselela ukuboniswa kwalo, akukho mfuneko yokuba liye kukhangela olu seto. Iya kunikwa amandla ngokuzenzekelayo xa besenza kwaye bagcina umboniso. Xa uqala umboniso, uya kuvula ngqo kwiwindow nganye!
Isitshixo: Dlala iSilayidi kwiWindows
Kuthekani ngoKeynote? Eyona nto iphambili ine dlala kwi window ukhetho oluhlobo oluhle. Ukuba ucofa indawo ethi Dlala kwindawo ekuhamba kuyo kuqala, uza kubona ukhetho lokudlala nje Umboniso wesilayidi kwiwindow endaweni yesikrini esigcweleyo. Akubonakali ngathi sisimo esinokugcinwa ngomboniso.
Ngendlela… ukuba uqaphele ukuba ndisebenzisa zombini uMboniso weSilayidi kunye noMboniso weSilayidi kweli nqaku, kungenxa yokuba u-Microsoft ubhekisa kwinkcazo-ntetho eya kuphila njengoMboniso weSilayidi ngelixa i-Apple ibhekisa kuyo njengoMboniso weSilayidi. Ungandibuzi ukuba kutheni ezinye zeenkampani zobuchwephesha zingenakho nje ukwamkela ulwimi olufanayo… ndiyibhale nje ngendlela ebenze ngayo.
tags: Ukudibana kukaGoogleMicrosoft PowerpointAmaqela eMicrosoftintetho onlineIworkshop ekwi-intanethiipower Pointyabelana ngefestileisikrini sokwabelanaslideiisetingi zomboniso wesilayidislideshowumsitho obonakalayowebinarwindowyenza nkulu
Umbukeli weJSON: Isixhobo saSimahla sokuCoca kunye nokuJonga ukuphuma kwe-API yakho yeJSON